1939 AJS 500 V4 Racer – Classic British Motorcycles – Motorcycle Classics | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော → 1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား - ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
19 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား – ဂန္ထဝင်ဗြိတိန်မော်တော်ဆိုင်ကယ် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဂန္တဝင်
ebay မှာတွေ့သည်: 1978 Yamaha SR500
1939 AJS 500 V4 ပြိုင်ကားသမား
Top speed: 135တစ်နာရီမိုင်
Weight (dry): 405lb (243ကီလိုဂရမ်)
But just once, ထက်ပိုပြီး 60 years ago,aBritish manufacturer dared to invest in the exotic rather than the functional. And even if the result tookawhile to winarace (thanks toascattered development path that was first interrupted by WWII, then terminated by the postwar ban on forced induction), it eventually led to the creation of the bike that won the first-ever 500cc World Championship, တွင် 1949.
2011 Harley-Davidson Water Cooled Engine US Patent, concept, သူလျှိုရိုက်ချက်များ
Moto Guzzi 1000 Daytona Injection Ducati 60 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 ဆူဇူကီး AN 650 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Brammo Enertia KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Aprilia Mana 850 Ducati Diavel Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Bajaj Discover တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01